Ulawulo loLuntu lwenziwe ngokufanelekileyo | Martech Zone
Ulawulo loLuntu lwenziwe ngokuLungileyo
NgoLwesine, Agasti 29, 2013 NgoLwesihlanu, Agasti 30, 2013 UKelsey Cox
Nangona iindima zabo zingahluka kakhulu kumzi mveliso omnye ukuya kwelandelayo, abaphathi basekuhlaleni bahlala benembopheleleko yokukhulisa abaphulaphuli kunye nokuzibandakanya. Ngamaxesha onke owokuqala emgceni wokubonelela iimfuno zabathengi kunye nezicelo zakho, bahlala begxile kokulungileyo kwinkampani yakho: ukunceda ukugcina abalandeli boluntu, ukoyisa iitroli ezingenakuphepheka, kunye nokuphucula umbono wegama lakho.
Nokuba uhlela izithuba kunye nemiyalezo, ukuququzelela iminyhadala, okanye ukuguqula ingxelo engentle ibe yeyakhayo, abaphathi babahlali yeyona nto ibalulekileyo phakathi kwabathengi kunye negama lakho… ukwenza imisebenzi emininzi kunye noxanduva ngaxeshanye. Kwelinye icala, bakhuthaza abaxhasi ukuba babe ziintshatsheli-babanike ukwamkelwa kwi-Intanethi, ubume bemodareyitha, kunye nokufikelela okukhethekileyo kulwazi lwenkampani. Kwelinye, bachonga, bavavanya, kwaye basombulule ukungavisisani kunye nokuwa phakathi kwamalungu oluntu, ukugcina ingxelo engalunganga ngokuchaphazela umfanekiso wakho wequmrhu.
Bazifezekisa njani iinjongo ezinesibindi? Ngoku ka Fumana ukonelisekaUkugcina uluntu olungqongqo kulucelomngeni kodwa kuyenzeka ngokuqinisekileyo kwabo baxhotyiswe ngokufanelekileyo. Jonga ezabo izibonelelo zomphathi woluntu kunye nesikhokelo sempumelelo:
tags: iqhaweUlwazelelo loluntuumphathi woluntuInkonzo eyenzelwekwi-infographictrolls
UKelsey Cox nguMlawuli wezoNxibelelwano e Ikholamu yesihlanu, iarhente yokuyila egxile ekuboniseni idatha, kwi-infographics, kwimikhankaso ebonakalayo, kunye ne-digital PR eNewport Beach, eCalif. Unomdla ngekamva lomxholo wedijithali, intengiso, uphawu kunye noyilo olulungileyo. Ukonwabele kakhulu ulwandle, ukupheka, kunye nobugcisa bobugcisa.
Yenza iWindowsPress jetpack Ububanzi beKhowudi emfutshane
Isikhokelo samashishini amancinci kuLawulo lweeNtlalontle
Agasti 30, 2013 kwi-2: 49 AM
ithini idilesi yakho yetweet kelsey??